Tena tiako i StumbleUpon | Martech Zone
Alarobia, Oktobra 25, 2006 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Tiako ny mizara statistika… ka ity misy ampahan'ny statistikan'ny loharano manondro ny bilaogiko eto. Ny iray amin'ireo entana ho hitanao dia izany StumbleUpon dia lasa loharano referral tsara ho an'ny tranokalako. Samy miavaka ny habetsahana sy ny kalitaon'ireny hira ireny, marihinao fa ny mpitsidika maro an'isa dia mizaha pejy iray mihoatra ny iray.
Ny StumbleUpon dia manamora ny famerenana tranonkala fotsiny. Mampiasà boaty ho an'ny StumbleUpon ao amin'ny Firefox izay mandefa ahy any amin'ireo pejy mety hahaliana ahy, mamela ahy hilaza na tiako izy ireo na tsia, mamela ahy handinika ireo pejy nofidiko ary mamela ahy hifandray amin'ireo olona hafa izay ampiasao ny serivisy. Oay!
Mampihomehy, tsy maintsy 'tafintohina' manodidina ny tranonkalany ianao. Mbola mila injenierie azo ampiasaina izy ireo hanampy amin'ny famaritana ny tranokala… na izany na tsy izany dia mpandresy. Tiako izany ho an'ireo mpitsidika izay entiny ato amiko, ary koa ireo endri-javatra amin'ny tambajotra sy ny fanoratam-boky. Tsotra sy maivana! Manantena ihany koa aho fa manohy manitatra ny sokajy misy azy ireo izy ireo. Tsara kely kokoa noho izy ireo Digg, nefa mbola sarotra zaraina.
Visit Ny StumbleUpon-ko page. Androany dia ho hitanao fa 'tafintohina' amin'ity tranonkala mampino ity aho: Billy Harvey. Ny asan'ny Flash, ny fitetezana an'ity tranonkala ity, ny vokatry ny fanovana ny toerana misy mozika rehefa mivezivezy…. Wow. Tena tranonkala tsy mampino! Mety tianao na tsy tianao ilay mozika (mihira ho azy izy!). Gaga ilay tranonkala fotsiny aho.
Tags: by MediaWikiStumbleUpon
26 Oktobra 2006 à 1:08
Tafintohina ny iray tamin'ireo lahatsoratro taloha elaela lasa izay – heveriko fa nahazo 70-80 ny isan'ny tifitra tamin'izany! Mampiankin-doha loatra amin'ny tsiroko izao anefa 😛
26 Oktobra 2006 à 7:02
Zavatra mampihomehy - Nijery ny antontan'isa bilaogiko aho omaly hariva ary nahatsikaritra fa nandefa mpitsidika vaovao 30 ho ahy i Stumbleupon. Amiko, izany dia maneho ny 80% amin'ny fifamoivoizanako mandritra ny andro – ary mbola tsy nandre momba an'i Stumbleupon mihitsy aho taloha…tsy maintsy noho ianao nampifamatotra ahy tamin'ny fomba ahoana. Tsy afaka misaotra anao, Doug, amin'ny zavatra rehetra ataonao. Tohizo hatrany e!! Ao amin'ny mailaka ny seky (hee hee).
16 Aogositra 2008 à 4:40
Fampahalalana mahafinaritra! Misaotra nanoratra ity. Voninahitra ny mandray anjara amin’ny dinika.